Rafitra WP-WDG China – Ampiharo amin'ireo orinasa mpamokatra sy agrochemical Field | Qiangdi
Voalohany, sakafo ara-nofo avy amin'ny mpamatsy - ny famindrana fitaovana mankany amin'ny 3 m voalohany3mixer ho an'ny premixing, ary ny mpanangona vovoka dia hanangona vovoka mandritra ny fizotran'ny fihinana, avy eo miditra ao anaty milina fanodinana QDF-600 ho an'ny fikosoham-bary, ny haben'ny poti-bokatra dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fanitsiana hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandehan'ny kodiarana sokajy ,. Aorian'ny fikosoham-bary, ny fitaovana dia hafindra any amin'ny cyclone sy ny mpanangona vovoka eo an-tampon'ny 4m voalohany3 mixer amin'ny alàlan'ny herin'ny centripetal an'ny mpankafy drafitra, avy eo afindra amin'ny 4m faharoa3 mixer ho an'ny fampifangaroana alohan'ny fonosana na famindrana amin'ny rafitra WDG.
Rafitra WP / WDG - Ampiharo amin'ny drafitra mikoriana agrochemical
Ny rafitra WP dia fitambarana tonga lafatra amin'ny teknolojia fanodinana jet, teknolojia fampifangaroana ary teknolojia fanaraha-maso manan-tsaina. izay vokatra mahafa-po amin'ny famonoana fanafody famonoana bibikely sy fametahana marobe ?, Mandritra izany fotoana izany dia mahafaly ny fangatahana tontolo iainana izay tsy tokony hisy vovoka mandritra ny fizotrany rehetra.
Ny WDG (granule azo esorina amin'ny rano) fantatra amin'ny anarana hoe Agent vovoka maina azo ovaina na karazana voam-bary, ny akora ho an'ny vovo-tany (WP) noforonin'ny granulation indray mandeha tao anaty rano, dia mety ho rava haingana sy miparitaka, ny fanomanana granular dia miorina amin'ny rafitra fanaparitahana mafy.
Ny granulation no fototry ny fizotrany manontolo. Granulator no lakile hahazoana antoka fa miaro ny bibikely sy ny fanamainana areti-mifindra, izay mifototra amin'ny toetra mampiavaka ny bibikely, ny data momba ny andrana ary ny ohatra fampiharana momba ny injeniera, ny fisafidianana granulator extrusioner mihodina na ny granulator extruder kambana. fizarana), na granulator visy (Manampia rafitra rano mangatsiaka amin'ny fizarana efitrano Granulation), na granulator fandriana mihetsika (hafa ny fizotran'ny fipetrahana am-pandriana ary ny fizotran'ny fitrandrahana extrusion dia hafa.) Ny fepetra takian'ny hamandoana ao anaty granulation dia manodidina ny 8-18%. amin'ny toetra mampiavaka ny vokatra sy ny fizotry ny famokarana, hamaritana ny volavolan'ny fizotrany, indrindra: ny fametahana, ny famaohana, ny fanamainana, ny fisavana, ny fonosana, ny rafitra mafana, ny rafitra fanesorana vovoka.
Tabilao mikoriana ny fantsom-pilalaovana Jet Mill WP Line / WDG Line
Voalohany, halefa ao anaty buffer 1000L ny fitaovana manta, avy eo mankany amin'ny masinina mixer mitsangana ZGH-1000 avy amin'ny Vacuum ZKS-6 ho an'ny fifangaroana lena avy eo alefa any amin'ny Granulator extrusion XL-450 (3pcs) amin'ny alàlan'ny mpizara 500L ho an'ny granule lena, avy eo mankany QZL- Pelletor 1300, ary mankany amin'ny ZQG-7.5 X 0.9 Vibrate Fluid-bed-dry granular strip granules avy eo Ze-1800 centre vibration sivana ho an'ny sivana mba hahazoana grama habe ilaina.
Fanamainana fandriana tsiranoka ho an'ny granulation
Fanamainana fandriana tsiranoka mihetsiketsika ho an'ny vovoka simika
Fandriana tsiranoka hovitrovitra dia teknolojia vaovao novolavolaina tamin'ny farafara fandriam-paharavoana miiba. Ny vibration mekanika dia asiana eo amin'ny fandriana tsiranoka. Ny sombin-javatra mando dia miditra amin'ny renirano ary mamorona fandriana mihena. Ny fitaovana dia esorina noho ny hery mampientam-po. Ny hovitrovitra amin'ny lozam-pifamoivoizan'ny rivotra dia manetsika ny fantson-drakitra ireo poti-javatra sy ny fivezivezena ara-nofo ao am-pandriana. Ny fitaovana misy tsiranoka dia mifandray amin'ny rivotra mafana ary miaraka amin'izay koa mitondra hafanana sy famindrana faobe. Ny vokatra maina dia miparitaka amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo.
1. Mampiasa ny haitao mandroso fluofluidization, kely ny fahasimban'ny faritra poti-javatra maina.
2. Fihetsiketsehana maharitra, fahaiza-mampifanaraka tsara.
3. Ny hovitrovitra dia miteraka fluidization, mihena ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra maina, ary sombintsombiny vitsivitsy voatazona.
4. Ny fotoana ipetrahana ara-nofo dia mifanaraka, ny kalitaon'ny vokatra dia fanamiana.
5. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanamainana fitaovana maivana amin'ny hafanana amin'ny fotoana fohy, toy ny rano ambonin'ny
fanamainana ny CUSO4 · 5H2O misy rano kristaly, MgSO4 · 7H2O.
Azo ampiasaina amin'ny fizotrany maina na mangatsiaka, azo ampiharina amin'ny vongan-tsokosoko na potika ary tsy mora mikoriana ny vokatra tsy ara-dalàna, na satria mahatonga ny sombiny tsy dia mitaky firy ary mitazona ny hafainganan'ny vokatra fluidization ary mora mifamatotra, mora tohina amin'ny fanamainana mari-pana ary mitahiry fitaovana gesso vokatra ambonin'ny rano fanesorana avy.
MODELY Faritra mandry
(M2) Midira ny mari-pana amin'ny rivotra
(oC) Ny mari-pana amin'ny rivotra
(oC) Fahaizan'ny rano etona
ZLG3 × 0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0,8 × 2
ZLG6 × 0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1,5 × 2
ZLG6 × 0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1,5 × 2
XL Rotary sy Extreme Granulator
Ity milina ity dia mandray elanelan'ny fikosoham-bary mihodina mba hikosehana ny volon-javatra mando ho granule miendrika tsanganana amin'ny alàlan'ny varingarina sieve vy izay omena ho an'ny pelletize amin'ny fizotrany manaraka. Ny masinina dia afaka mahazo granule habe samihafa amin'ny fanovana ny sieve vy tsy metaly.
Izy io dia afaka manamboatra akora mando ary mahazo habe samihafa arakaraka ny fitaovana sy ny takiana.
Ny herin'ny môtô dia ampitaina amin'ny kodiarana telozoro mankany amin'ny boaty fiarakodia ao amin'ny mpampiantrano, ary mizara ny herin'ny alàlan'ny faritra ampita ao anaty boaty ho an'ny kitapo. Manampia akora masaka ao anaty hopper sakafo, tsindrio avy eo ambony.
Aorian'ny fangaro, ny fitaovana dia fenoina ao anaty chute famahanana ary noterena fandroahana ivelany tamin'ny lelan-tsabatra manokana. Rehefa tototry ny elanelana eo anelanelan'ny elatra sy ny harato ny fitaovana, dia hanapaka azy io ho toy ny habe mampiray izy io.
Ouput 150-250kg / ora (endrika flake), 50-100kg / ora (endrika granule)
Haben'ny granule 0.5-2mm
Max pression 294Kn (30T)
Fanindriana ny tombo-kase 9.8Kn
Motera famahanana 2.2Kw
Motor mitam-piadiana 2.2Kw
Môtô manery 7.5Kw
Hafainganana visy 6-33 azo ovaina
Hafainganana ny kodia 4-25 azo ovaina
Ny refin'ny kodiarana famoretana 240X100mm
Lanja (eo ho eo) 2000Kg
Dimension lehibe 1600X1000X2300mm
Fifehezana ny refin'ny kabinetra 600X400X1300mm
Ny masinina dia mety indrindra amin'ny indostrian'ny fanafody, indostrian'ny sakafo, ny indostrian'ny zava-pisotro misy alikaola sy ny sisa, io dia afaka manamboatra qanulate ny akora ilaina ny qanule ilaina. Indrindra, mety amin'ny akora misy adhesive miraikitra izy io.
Ny faritra rehetra mifandray amin'ny akora amin'ity milina ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny hatsarany dia ny hatsarany. Ny fandefasana azy dia mandeha ho azy. Izy io dia mety amin'ny famokarana andalana ihany koa.
Patameter teknika lehibe
Ny haben'ny antsy fikosoham-bary (mm) 300 400
Diameter granule (mm) Φ2 ~ 2.2 (Mety mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa izany) Φ1.2 ~ 3 (Mety mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa izany)
Dimezy ankapobeny (mm) 700 × 540 × 1300 880 × 640 × 1300
Herin'ny motera (kw) 3 4
Lanja (kilao) 350 400
Fahaiza-mamokatra (kg / h) 100 ~ 200 140 ~ 400
Fangaro mixer hafainganam-pandeha tsy misy fangarony
LGH karazana mitsangana mixer dia voaforon'ny farany mandefa familiana ara-nofo sy ny haingam-pandeha mamaky vodin-tsambo, ny eo ambany fantsom-pamokarana mandefa fitaovana hatrany an-tampon'ny rindrin'ny kaontenera.
Ny famonoana haingam-pandeha haingam-pandeha dia manapotika ny fitaovana hahatonga tanteraka ny tsingerin'ny fitaovana toy ny vortex, mba hamaranana ny fifangaroana mitovy amin'ny fotoana fohy.
Endri-javatra amin'ny fitaovana
LGH mitsangana karazana haingam-pandeha mifangaro haingam-pandeha no karazana mixer tena mahomby farany an'ny orinasanay, izay nanangona teknikan'ny fandrosoana ao an-toerana sy any ivelany.
1.Ny fantsom-bokatra farany ambany dia mandefa ny fitaovana hatrany an-tampony amin'ny alàlan'ny hery afovoany. Ary ny fitaovana ambony dia milatsaka amin'ny farany afovoany, mba hanao ny tsingerin'ny fitaovana toy ny vortex.
2.Ny famakivaky haingam-pandeha haingam-pandeha dia manapotika tanteraka ireo fitaovana betsaka indrindra izay alefan'ny fivoy farany.
3.Ny fitaovana dia afaka afangaro amin'ny fomba mitovy amin'ny fotoana fohy noho ny revolisiona haingam-pandeha haingam-pandeha. Ny hafainganam-pandeha sy ny fitoviana dia ny tsara indrindra amin'ny milina fampifangaroana rehetra eo amin'ny tsena anatiny. Ny fitoviana dia afangaro 100%.
4.Start ny valizy famoahana, haingana be ny famoahana azy, ary mora diovina ilay masinina.
5.Ny faritra mifandraika amin'ny milina dia vita tamin'ny vy tsy misy fangarony, mandritra ny fifangaroana, ny fitaovana dia tsy hikorontana, metamorphic ary very.
6.Ny fitaovan'ny masinina ho an'ny fitaovana maina sy lena tsy mitovy mba afangaro, indrindra fa ny fampifangaroana ny henan'akoho, ny fanafody levona, ny fisotro misy poizina sns.
Sarimihetsika vibro ZS Rorary
antsoina koa hoe rotary vibro sifter, vibratory sieve.Izy dia afaka manivana ilay ranon-javatra toy ny rano maloto sy menaka mpanimba sns, manala ny fahalotoana ao anaty akora, toy ny vovo-dronono, vary, katsaka sns. fepetra takiana.
Rotary saribao / saribao ultrasonic mihodina milina fanasiana lamba nozahana fitaovana teknika avo lenta avo lenta. Izy io dia misy mpamokatra ultrasonika sy efijery mihetsiketsika. Famakiana zava-dehibe eo amin'ny fahombiazan'ny fitiliana. Ity milina sieving ity dia mandray an-tanana ny fifehezana ultrasonic mandroso ary mamaha olana maro ateraky ny fahita matetika, mahatsapa tokoa ny fitambaran'ny fiasan'ny ultrasonika sy ny sieve vibration.
Fampiasana marobe toy izao:
Ny karazana multi-layer dia afaka manasaraka sy manasaraka vondrona dimy misy sombintsombiny samihafa amin'ny fotoana iray. Mety amin'ny fitaovana maina izy io.
Ny fangaro ny mivaingana sy ny ranoka dia azo sarahina amin'ny fomba miavaka amin'ny karazana tokana na marobe ho lasa fitaovana samihafa.
3. Esory ny loto
Ny singa dia afaka manasaraka haingana ireo singa kely be loatra na manaloka kely an'ireo fitaovana marobe
Rafitra fanadiovana no ampiasainay fitaovana ultrasonice ho an'ny milina fanasiana efijery volo ultrasonic / saribao
Kneader dia fitaovana mety tsara hametahana, afangaro amin'ny fitaovana polymerize amin'ny viscosity avo sy plastika elasto. Ny andiam-pametahana tsirairay dia manana kofehy sigma roa ao anatin'ny efitrano fampifangaroana karazana w. Ampiasaina betsaka izy io amin'ny fametahana, fampifangaroana, fanorotoroana, fanaparitahana ary fametahana indray ny pira viscosity avo lenta na ireo fitaovana elastoplastic, izay tsy zahan'ny mpamokatra vovoka sy ny blender ranoka. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny indostria takiana amin'ny fametahana haavo avo lenta toy ny fikolokoloana, ny simika, ny fingotra, ny sakafo ary ny fanomanana fanafody. Ny vokany dia tsara kokoa noho ny mixer. Kneader dia fitaovana fampifangaroana manokana miaraka amin'ny lelany roa. Ny iray haingana dia matetika mihodina amin'ny hafainganam-pandehan'ny revolisiona 42 isa-minitra, miadana iray amin'ny hafainganam-pandehan'ny revolisiona 28 isa-minitra. Ny hafainganam-pandeha hafa dia mahatonga ny fitaovana fampifangaroana hahazo homogenate haingana.
Injeniera momba ny zavamaniry
- Famolavolana zavamaniry
- Fanaraha-maso, fanaraha-maso ary automatisation
- Fampivoarana ny lozisialy sy ny fandefasana fampiharana amin'ny fotoana tena izy
- Fanamboarana milina
- Fandrafetana tetikasa
- Fanaraha-maso sy fitantanana ny tranokala fananganana
- Fametrahana sy fanandramana ireo rafitra fikirakirana sy fanaraha-maso
- Ny kaomisiona momba ny milina sy ny zavamaniry
- Fiofanana ho an'ny mpiasa
- Fanohanana mandritra ny famokarana
Famaritana ny tetikasa
- Fianarana azo atao sy fandinihana
- Fikajiana ny vidiny sy ny tombony azo
- Fanomanana fotoana sy foto-drafitrasa
- Vahaolana turnkey, vahaolana amin'ny fanavaozana ny zavamaniry ary fanavaozana ny maoderina
- injeniera fantatra
- Fampiasana ireo haitao farany
- Fitrandrahana ny fahalalana azo avy amina fampiharana an-jatony manerana ny indostria rehetra
- Manam-pahaizana manokana amin'ny injeniera sy mpiara-miasa efa za-draharaha aminay
Teo aloha: Vary mihosin-dra mitsangana mametaka LSM
Manaraka: Jet Type Jet Type malaza